Xasan Cali Khayre iyo lixdii Ra’iisul Wasaare Ee ugu Dambeeyay Iyo Sida Ay Xilka Uga Tageen | Gaaroodi News
Xasan Cali Khayre iyo lixdii Ra’iisul Wasaare Ee ugu Dambeeyay Iyo Sida Ay Xilka Uga Tageen
July 28, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
1- Cumdar Cabdirashi Cali Sharmarke
Wuxuu ahaa qof siyaasadda Soomaaliya aan si wayn galangal ugu lahayn ka hor intii aan xilkaa loo magacaabay, waxayna ahayd xilli dowladda ay dagaal adag kala kulmeysay kooxo muqaawamo ahaa iyo Al-Shabaab oo qeybo badan oo Muqdisho ah haysatay. Cumar Cabdirashiid wuxuu ahaa ra’iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dowladdii Sheekh Shariif Sheekh Axmed
Kontonkii maalmood ee ugu horeysay ee xafiiska ra’iisulwasaarah uu ka shaqeynayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku guuleystay bixinta mushaaraadka ciidamda iyo shaqaalaha dowlada. Inuu xilka iskacasilo Farmaajo waxaa qeyb ka ahaa heshiiskii muranka dhaliyay ee Kampala Accord. wuxuu xilka hayay muddo kooban.
Wasiirkii Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumaddii Farmaajo, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayuu Sheekh Shariif u magacaabay xilkii Ra’iisul Wasaarah, 23-kii June ee 2011, waxayna Baarlamaankii ku meelgaarka ahaa ku ansixiyeen si aqlabiyad ah, 28-dii isla bishaas. Gaas wuxuu ahaa ra’iisul wasaarihii hoggaaminayay xukummaddii dalka ka saartay xilligii Kumeelgaarka ahaa.
Balse sannad ka dib markii xilka loo magacaabay Saacid, waxaa soo baxay khilaaf u dhexeeyay isaga iyo madaxweynaha oo ka dhashay isku shaandheyn uu ku sameyn rabay golihii wasiirada. Saacid iyo Xasan Sheekh wuxuu khilaafkoodu bilowday sannad ka dib markii xilka loo dhiibay
Khilaafkaas wuxuu markale ka dhashay isku shaandheyn uu ra’iisul wasaaraha doonayay in uu ku sameeyay golihii wasiirada, waxaana lagu eedeeyay in uusan madaxweynaha la tashan. Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa xilka ku waayay mooshin si weyn loogu loollamay
Ka dib waxaa soo baxay wasiirro ka tirsanaa xukuummaddii Cabdiweli Sheekh Axmed oo Ra’iisul Wasaaraha ka dalbaday inuu iska casilo xilka isagoo dhowraya danaha dalka
Wuxuu ahaa ra’iisul wasaaraha keli ah ee mar labaad xilka ku soo noqday. Wuxuu markii labaad xilka kala wareegay Cabdiweli Sheekh Axmed oo mooshin xilka looga qaaday. Cumar Cabdirashiid waa ra’iisul wasaaraha keli ah ee laba goor xilka ku soo noqday, doorashadii Farmaajo ka dib ayuuna xilka wareejiyay
Wuxuu codka kalsooni ah ka helay 231 xildhibaan, 1-dii bishii March ee 2017-kii. Golihiisii Wasiiradana waxaa la ansixiyay 21-kii isla bishaas. Xasan Cali Khayre, waa ra’iisul Wasaarihii ugu waqtiga dheeraa